Vaovao - Famoahana vokatra vaovao - mpankafy bateria azo averina 9 santimetatra
Amin'izao fotoana izao dia misy toe-javatra voafetra amin'ny herinaratra, tsy any Shina ihany, fa any amin'ny firenena hafa ary na manerana izao tontolo izao aza, ny tsy fahampian'ny herinaratra. izahay (Kennede Electronics MFG CO LTD)
Ny Modely Vaovao KN-L2819, mpankafy batterie 9 mirefy Rechargeable, miaraka amin'ny bateria Lithium 7.4V3600mAh, manana hafainganam-pandeha 3 ho an'ny safidinao, mandeha ho azy ankavia sy havanana 40 ° mihozongozona ny lohany, mora ampiasaina amin'ny fianakaviana. Ary ny jiro amin'ny alina dia manana LED 12pcs, tena mety ho an'ny zazakely sy ny ray aman-dreny.
Ny endrik'ity vokatra vaovao ity:
4 IN 1 Mahery Air Circulator Fan: Tsy toy ny mpankafy nentim-paharazana, ny fanavaozana turbo Technology dia mahatonga ny mpankafy mangatsiaka hamorona rivotra miolikolika izay mivezivezy ny rivotra manerana ny efitrano. Tsy mpankafy fotsiny izy io, fa jiro ihany koa miaraka amin'ny jiro LED. Azonao atao koa ny mampiasa azy io ho jiro amin'ny alina. Ny mpankafy birao dia manana rivotra 3 azo amboarina. Tsy ilaina ny mijanona eo akaikin'ny fantson-drano mba hijanona ho mangatsiatsiaka, ny rivotra mangatsiaka dia mahatonga anao hahatsapa ho mahazo aina amin'ny zorony rehetra amin'ny efitrano. Azo apetraka amin'ny rindrina ao an-dakozia ihany koa.
Fanorona mangina ho an'ny efitrano fatoriana: Miaraka amin'ny fikorianan'ny rivotra ambony, ity mpankafy latabatra compact ity dia afaka mamaly tsara ny filanao rehetra. Ampiasaina amin'ny teknolojia DC, mangina sy mahomby ny fantson-drano elektrika mba hampangatsiaka mangina ny efitrano mba hahafahanao matory tsara. Ny haavon'ny tabataba dia ambany noho ny 25dB, mitovy amin'ny riaka miboiboika na bitsika malefaka ka mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny efitrano fatoriana, efitranon'ny ankizy ary birao. Ity mpankafy mangina ity dia mety ho an'ny matory kely, ny olon-dehibe ary ny ankizy, mamela anao hanonofy mamy.
DC Teknolojia & angovo mahomby: Ity mpankafy mangina ity dia tena mitsitsy angovo! Ity mpankafy birao ity dia misafidy ny motera DC mandroso indrindra izay ny tombony miharihary dia mahomby amin'ny angovo, mangina ary fiainana maharitra. Ny fanjifana herinaratra dia 3-24W ihany, midika izany fa 1 kWh ihany no ilaina amin'ny fampiasana tsy tapaka mandritra ny 330 ora (fametrahana farafahakeliny), izay afaka mitahiry 80% amin'ny herinaratra raha oharina amin'ny mpankafy motera AC! Ho fanampin'izay, ampiasao ity fantson-drivotra mangatsiaka ity, hampitombo 80% ny fahombiazan'ny rivotra!
Fan Circulator Efitrano manontolo: Miaraka amin'ny fiasan'ny oscillation 3D, ity mpankafy oscillating ity dia afaka mihodinkodina 80° mitsivalana (auto) ary 120° mitsangana (manual), manome ny fivezivezena tanteraka amin'ny rivotra rehetra manerana ny efitrano iray, matanjaka ampy hanamaivanana ny olona ao amin'ny efitrano 30m². Hazo tsy manam-paharoa, famolavolana tsotra. Mora disassemble sy madio. Izahay no mpivarotra mivantana amin'ny marika, mamaly tsara ny hafatrao ao anatin'ny 24 ora, serivisy mpanjifa mahafinaritra sy fanohanana.